K: A to Z
A to Z တဲ့..
ဗမာလိုတ၀က်ဘိုလိုတ၀က်ရော.. ကဗျာတွေ ရော..ပုံတွေ ရော..ရုပ်ရှင်တွေ ရော... တချို့ ဆို..မဆန့်လို့ ၂ပိုင်း လောက်တောင် ခွဲ ရေး ရ...။ မနော်က.. တော်တော် အလုပ်ပေး လိုက်တာပဲ..။ သူများ ရေးတာ တွေ လိုက် ကြည့်တော့..အိုင်ဒီယာလေး တွေ တူ နေ တာ လည်း တွေ့ တယ်...။ တကယ်တော့.. ခိုးချ ဖို့.. ကြိုပြီး စကားခံ လိုက်တာပါ။း) မလွယ်တော့ မလွယ်ဘူး...။ မ လွယ်တာ ကတော့.. အခု ကိုပဲ.. စာရိုက်နေ ရင်း.. လက်ကွက်ကို.. ဗမာလို ပြောင်းလိုက်.. အီးလို ပြောင်း လိုက် နဲ့.. တော်တော့်ကို အလုပ် စရှုပ်ပြီ။
အင်း...သူများ နဲ့ မတူ အောင် ..ဘယ်လို ရေး ရ ပါ့...။ ရိုးရိုး ရှင်းရှင်း လေး လည်း ဖြစ်ချင်တယ်... ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးလေး လည်း.. ပါရမယ်ပေါ့....
အဲ..ဟုတ်သေးပါဘူး.. ။ တော်ကြာ.. မနော် နဲ့..တခြား သူတွေက.. ရွဲ့တယ် ထင်နေ အုံးမယ်။ တကယ်တော့.. ABCD အကြောင်း က.. အဲဒီ ဝေါဟာရ တွေ နဲ့..စ သိ ခဲ့ ရတာ မဟုတ်လား..။ ဘ၀ မမေ့ အောင် ပါ..။း)
ဖြစ်သေးပါဘူး.. လူ နဲ့ သူ နဲ့ ဘလော့ နဲ့ တူအောင် တော့ ရေးမှ... ခပ်တည်တည်လေး ပေါ့..လာစမ်း..
ဘ၀ တခု မှာ အရေးကြီး တဲ့ ဟာ တွေလေ.. ဒါပေမဲ့..လူတိုင်း တော့.. အကောင်းဆုံး တွေ ရ ချင် မှ ရမယ်...။
မသက်ဝေ နဲ့ တူတူနော်.. ( ခိုးချတာ ဟုတ်ဘူးနော်)း)
မနက်တိုင်း..မြင်မြင် နေရ တာ ကြီးလေ...။ အမြင်ကပ်ကပ် နဲ့ ကို ချစ်နေရ...
Him လို့ ပြောလိုက် ရင်.. သူများတွေ ... ဘာလဲ ညာလဲ ထင်နေ အုံးမယ်...
Honest ပဲ လုပ်လိုက်ပါ့မယ်လေ...။ ရိုးသားတယ် ထင်အောင် နေပြမှ....။
I , Identity
ဟောဒီ ကမ္ဘာလောက ကြီး ပေါ်က.. စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တည်မူ..
Joy vs. Jealous
(ပန်ပန် နဲ့ တ၀က် တူတူ )
အံစာတုံး တတုံး ပေါ်က.. မျက်နှာ ၂ ခုပေါ့...။ တခု တွေ့ ရင်..တခု နဲ့ လွဲ လိမ့်မယ်။
နေ့တိုင်းတော့...K ဆိုတဲ့..ဘလော့ ကို ဖွင့်ကြည့် ဖြစ်တယ်။း)
ဒီ အက္ခရာ နဲ့ ဒီ ဝေါဟာရ က.. အမြဲလို တွဲနေသလို..အားလုံးလည်း..ဒါကိုပဲ တွေးမိ ကြမယ်..။ ဘ၀ တကွေ့ တိုင်းမှာလည်း..တွေ့ ကြရ လိမ့်မယ်..
ရိုးရာ လည်း မပျက်အောင် ပေါ့..း) ကျမ်းစာမှာ တော့..ဒီလို ဖွင့် ဆို ထားတယ်...
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. ( Corinthians 13: 4-13)
သူ့ အကြောင်း ပြောပြီးတိုင်း.. ကွင်းစ ကွင်းပိတ် ထဲကို အမြဲ ပို့ ထားရတယ်..။
Burma ( Myanmar)
(---) n (------)
We can't be together without it (n) it help us to write beautiful (n) complete (n) ..... (n) ...... sentence. just add up !!!!
Onus , that what we have to carry in our life, like it or not, heavy or light. Better name it 'Responsibility' so that worth to carry.
Who we are or where we are living is just our quota on this enormously spacious Universe.
We can not rule the Sky and we can not drink the whole Sea. We are just one of the dots of the Smallest Spot, sharing the Sky and the Sea. Why don't we give each other mutual respect? Shall we ! !
Ops.. time is running out.. I need to finish this up before dinner. I'd better change to Zaw Gyi font, otherwise my bloody poor English makes me deadly slow.....
ဟူး.. ဒီပို့စ် ရေးနေတာ..အချိန် တော်တော်ကြာ နေပြီ...။
အချိန်... အချိန်... သူ့ကို ပဲ..အသက်လို ရှု... ဘဏ်စာရင်း လို.. စိစစ်... ခရက်ဒစ် ကဒ် လို..သုံးဖြုန်း.. ပြီးတော့လည်း..သူပဲ ရှေ့ဆုံးက..ပြေးတယ်.. ဘယ်တော့..စောင့် မခေါ်ဘူး...း(
( မနော် ဆီက.. လွှတ်ပြစ် ထားလို့.. သွားကောက်လာတာ..)
ကိုယ် သွားတဲ့ လမ်း လွဲနေမှန်း သိလိုက်ရင်တော့.. ပြန်ကွေ့ မှာပဲ.. မနော်ရာ... ကွေ့ ခွင့် ပြု နော်..း)
ပြီးတော့.. U-turn မလုပ်တတ်ရင် Driving Test ကျ မှာလေ...း)
အဲ...အဲ... U-turn ကနေ.. အရှိန် ပါသွားလို့.....
အကြိုက်ဆုံး..နာမ်စား...( ဒီလောက်လေး တော့.. အီးလို ရေးကြည့် လိုက်အုံးမယ်..) ခဏ.....
The Pronoun I like the most ... ( wait ) we like the most... @@ Nop.. ;(
Now I know "We" is not always good. :P
the symbol of NO. We can use it to say.. NO............ (X) 2010
the symbol of False. Thanks (X). You make me to know the the True and to tick the (√ ).
Hallelujah ( Yahweh )
I want to roar this word at least onceaday.
humble but powerful.
ညစာ ပြေးစားလိုက် အုံးမယ်...။
Labels: Blogging , friends , fun
ရိုးရိုးသားသား Him ပဲ လုပ်ပါလေ.. :)
A to E ကို ပြန်ရေး
ဟားဟား ကေ နဲ့ တို့နဲ့ အကြံတူနေပြီ
A for Apple , B for Boy လုပ်မလို့ဟာ...ခိခိ ...:D
ထမင်းမစား ဟင်းမစားပဲ ထိုင်ရေးနေသလိုလိုနဲ့
စာလုံးတစ်လုံးကတော့ဖြင့် လွဲနေသလို လွှဲထားသလို ပါပဲ
ပြောတော့ပါဘူး ဘယ်တစ်လုံးဆိုတာ ...:)
အမရေးတာဖတ်ပီး သူငယ်တန်းစာ ပြန်ရွတ်ကြည့်တယ်
အကုန်မရတော့ဘူး ပြန်ကျက်ရတော့မယ် :P
ခုထိ ကလေးလို ဆော့တုန်းပဲကိုး...
Now I know We is not always good ဆိုပါ့လား...
shock ရှိတယ်လေ...း))
ရှယ်ပဲ...လူလည်ကျထားတာကိုပဲ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း လည်ထွက်သွားတယ်။ဆုံးသာ သွားရော...အဟီး
ပျော်ရွှင်နေသူတွေရဲ့ အေ တူ ဇီး တွေကို ဖတ်မိပြီးသွားတော့ ငိုကြွေးနေသူတွေရဲ့ အေတူဇီးကိုလည်း ဖတ်မိချင်လာတယ်... ဘယ်မှာ ဖတ်ရပါ့...
မချိုသင်းပြောသလို Him , Him မယ်ပေါ့
နည်းမျိုးစုံ A to ဇက် ကိုလာဖတ်သွားပါကြောင်း